112 responded out of 141 polled
သူငယ်ချင်း U-Report ကို ဘယ်လိုစသိတာလဲ?
U-Report ကမေးခွန်းတွေက သူငယ်ချင်းအတွက် အသုံးဝင်ပါသလား။
သူငယ်ချင်းအတွက် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးအုန်းနော်
သူငယ်ချင်းအတွက် ဘာကြောင့်အသုံးမဝင်တာလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးအုန်းနော်
U-Report မေးခွန်းတွေမှာ သူငယ်ချင်း ဘာကြောင့်ပုံမှန်ပါဝင်ဖြေဆိုဖြစ်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါ။
U-Report Myanmar ကို ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုလိုပါသလဲ?
U-Report Myanmar ကို အခြားအကြံပြုလိုသည်များရှိပါက ဖော်ပြပေးပါ။
11 responded out of 11 polled
112 responded out of 112 polled
94 responded out of 107 polled
99 responded out of 112 polled
90 responded out of 112 polled
84 responded out of 112 polled